राज्यले तालिम र बजार व्यवस्थापन गरिदिए पुग्छ
रबरको पनि रुख हुन्छ र ? झट्ट सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर कुरा सत्य हो । पूर्वका सुनसरी, झापा र पश्चिमका रूपन्देही लगायत विभिन्न जिल्लामा अहिले रबर खेति भइरहेको छ । तर सरकारी तबरबाट त्यसको बेवास्ता भएको भनेर किसानको गुनासो पनि उत्तिकै आइरहेको छ । साँच्चै रबर कसरी रुखबाट उत्पादन हुन्छ, यो कस्तो कस्तो ठाउँमा हुन्छ र यसको उपयोगिता के भन्ने विषयमा सबैलाई जानकारी नहुन सक्छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर झण्डै दुई दशकदेखि प्राकृतिक रबर उत्पादनमा लाग्नु भएका दिलीप धुस्वामीसँग ऐक्यबद्धताले गरेको कुराकानी :
कति भयोे रबर खेतिमा लाग्नु भएको ?
१७ वर्ष भयो ।
रबर खेति नै किन ?
अन्य पनि थुप्रै खेति गर्न सकिन्छ । तर उत्पादन के मा बढी हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । पहिला धानखेती भन्दा चिया खेति बढी हुन्थ्यो र मानिसहरू धान रोप्न छोडेर चिया खेतिमा लाग्थे । तर अहिले चिया खेति भन्दा ८ गुणा बढी रबरबाट आम्दानी हुन थालेपछि रबर खेतिमा मानिसको आकर्षण बढ्न थालेको छ । मैले पनि रबर उत्पादनमा भविष्य देखे अनि यो खेतीमा लागेँ ।
नेपालमा रबर खेतिको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?
भविष्य सुन्दर छ । किनकी अहिले नेपालमा ७ अर्बको रबर भारतबाट आयात गरिन्छ र नेपाली ७ अरब रुपियाँ भारत पठाइन्छ । यदि त्यो रकमको रबर नेपालमै उत्पादन गर्ने हो भने नेपाली रुपियाँ विदेश जान पाउने थिएन एउटा कुरा, अनि अर्काे नेपालका धेरै जग्गा जमिनहरू बाँँझिएर गएका छन् त्यस्तो ठाउँ हेरेर रबर लगाउने हो भने जग्गाको पनि उपयोग हुन्छ ।
कति क्षेत्रफल जग्गामा रबर लगाउनु भएको छ ?
अहिले मैले जम्मा ५ बिगाह जग्गामा रबर लगाएको छु । १ बिगाहबाट उत्पादन लिन सुरु गरिसके भने ४ बिगाहमा नयाँ १३ सय बोट विरुवा रोपेको छु ।
प्रशोधन कसरी गर्नु हुन्छ ?
सुरुमा रुखको २० इन्च गोलाइ र १ सय ३० सेन्टीमेटिरको दुरीमा बोक्रा काटिन्छ । त्यहाँबाट दूध जस्तै चोप आउँछ । त्यसमा थोरै एसिड हालेर त्यो चोप जमाउछौँ अनि सुकाउँछौ । अनि फ्याक्ट्रीमा लगेर क्रेन मेसिनमा पेलेर रबर निकाल्छौँ ।
रबर खेतीमा चुनौती पनि होला नी ?
सुरुसुरुमा मलाई निकै गाह्रो भएको थियो । छिमेकीले वातावरणलाई नराम्रो असर गर्छ भनेर विरोध पनि गरे । पछि मैले वातावरणविद्लाई बोलाएँ । उनीहरूले रबरको विरुवाले पनि अन्य विरुवाले झैँ दिउँसोको समयमा अक्सिजन दिन्छ भनेर बुझेपछि अलि सहज भयो ।
रबर खेती कस्तो कस्तो ठाउ“मा हुन्छ ?
रबरको लागि २१ देखि ३५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम उत्तम मानिन्छ । समुन्द्री सतहबाट ४ सय ५० मिटर उचाइ र वार्षिक २ हजार देखि ३ हजार मिलिलिटर सम्म पानी पर्ने ठाउँमा यसको खेती गर्न सकिन्छ ।
रबरको उपयोगिता के ?
रबरले ३ हजार भन्दा बढी आइटम बनाउन सहयोग गर्छ । एउटा गाडीमा मात्र रबरको ६० वटा आइटम चाहिन्छ । त्यस्तै अन्य हरेक सामान बनाउन रबरको आवश्यकता पर्दछ ।
यसको विकासका लागि राज्यको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
पहिलो कुरा त साना किसान राज्यको पहुँचसम्म पनि पुग्नै सक्दैनन् । त्यसैले राज्यले रबर किसानका लागि धेरै केही गर्नु पर्दैन मात्र किसानलाई तालिम र बजार व्यवस्थापन गरिदिए पुग्छ ।
प्रस्तुत अन्तर्वार्ता ऐक्यबद्धता मासिकको साउन अंक २०७२ मा पनि पढ्न सकिन्छ ।